YEYINTNGE(CANADA): Monday, August 10
or watch in youtubehere
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/10/20090အကြံပြုခြင်း
10 August 2009News
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/10/2009 1 အကြံပြုခြင်း
New flag design for Nuclear State of Myanmar after 2010
Voice of Burma (9 August Issue)
အဲဒီတော့လာသိမ်းရင် အပါမခံနဲ့ဗျို့ ။ သူတို့ရှေ့မှာတင်သွန် ပစ်လိုက်တာကောင်းတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ကသိမ်းပြီး ပြန်ရောင်းစားမှာဗျာ့။ ပြန်အမြတ်ထုတ်ပါတာဗျာ့ကျတော်တစ်ခါကြုံဖူးလို့ပြောတာပါ။
ကျတော်လားရှိုးမှာတုန်းက စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ဖွင့်တုန်းကပေါ့ဗျာ။ အင်ဂျင်ဝိုင် ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် စတာတွေရောင်းတုန်းက
စည်ပင်ကိုရော မီးသတ်ကိုရော ရဲကိုရော သူတို့ရဲ့ လက်သစ် ပြည်သူ့စစ်ကိုရော အခွန်ဆောင်ရတာဗျာ့။
အဲဒီတော့်ကျတော်ကဆိုင်အလတ်စားပဲရှိသေးတာကိုးဗျာ့။ မြို့ပြင်မှာ လိုင်စင်နဲ့ဖွင့်တာပါဗျာ။ မြို့ထဲမှာလည်း တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားသေးတယ်ဗျာ့ ။
အဲဒီတော့မြို့ထဲကဆိုင်ကတော့ လူကြီးခရီးစဉ်ရှိလို့ ဘာလို့ ညာလို့ ဆိုပြီး ကျတော်ဆိုင်က လာလာပိတ်တာဗျာ့
နောက်ဆုံးဗျာအမှန်ပြောရရင် တိုင်းမှုးသမီးဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်သွားမှာမို့လို့ ဆိုင်ကိုပိတ်ရတဲ့အထိပဲဗျာ့
မြို့ထဲကအခြားဆိုင်ကြီးတွေကျတော့မပိတ်ဘူးဗျာ ။ သူတို့နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆိုင်တွေဖြစ်နေလို့လေဗျာ။အဲတော့ကျတော့်မှာ စိတ်ကပေါက်လာတော့ ပေးလည်းပေးရသေးတယ်။
လာလာပြီးတော့လည်းပိတ်ခိုင်းသေးတယ်။ ကျတော်လည်း ရဲနဲ့ စကားများတာပေါ့ဗျာ ။ ဒါနဲ့ သူတို့က ဆိုင်ကိုပိတ်ခိုင်းတော့ ကျတော်ကလည်းပေကပ်ကပ် မပိတ်ပဲနဲ့ ဆက်ရောင်းနေတာပေါ့
ဒီတော့ သူတို့က မပိတ်လို့ဆိုပြီး ဆိုင်မှာရှိတဲ့ ဆီတွေကိုလာသိမ်းပါလေရော။ ကျတော်လည်းဘယ်အပါခံမလည်းဗျာ ။ ရှုံးမယ့်အတူတူတော့အထူးဘူးလေဗျာ။အဲတော့သူတို့ရှေ့မှာတင်ပဲ။
ဆီကိုအကုန်သွန်ပစ်လိုက်တာ သူတို့လည်းမရဘူးကျတော်လည်းမရဘူး။သူတို့ကဆီမ၇တော့ ဂါလံခွက်တွေ ပုံးတွေကိုသိမ်းသွားတယ်ဗျာ့။ ၆ သိန်းဖိုးလောက်တော့ပါသွားတာပေါ့ဗျာ့။
အဲဒီတရားဝင်ကတော့ပိုဆိုးတယ်ထင်တာပဲ။မီးသတ်ရံပုံငွေအတွက်။ တိုင်းရံပုံငွေအတွက် လူကြီးခရီးစဉ်အတွက်။ ဘာပရောဂျက်အတွက် ညာပရောဂျက်အတွက်
ဘယ်သူလာလို့ဘယ်ဝါလာလို့ စတဲ့စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပဲ ကျတော့်ဆိုင်ပြုတ်ခဲ့ရတာပါပဲဗျာ။
ကျတော်ကသိန်းရာ ထောင်ချီပြီးရင်းနိုင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျာ့ ဆယ်ချီပြီးလောက်ပဲရင်းနိုင်တာမို့လို့ပြုတ်တာပေါ့ဗျာ။တစ်ချို့တွေ သိန်းထောင်ချီပြီးရင်းထားတဲ့ဆိုင်တွေကျတော့နည်းနည်းမှမကပ်ရဲဘူးဗျာ့ ။ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေပေ့ါဗျာ.
အဲဒီတော့ကျတော်လည်းမပေးဘူး ရှင်းပြခဲ့တာလည်း သူတို့သိပါတယ်ဗျာ။ မရပါဘူး။ တစ်နေ့တော့ပြဿနာတတ်တာပေါ့ဗျာ့။ ကျတော်ဆိုင်ကကောင်လေးကို ဆွဲသွားတယ်ဗျာ့
မိုက်ရိုင်းတဲ့မီးသတ်နဲ့ရဲတွေပေါ့ဗျာ့။ ဆိုင်ကအလုပ်သမားကောင်လေးကိုသနားတော့ကျတော်ကဘယ်နေနိင်ပါ့မလည်း။ သူတို့ကလည်းမရရအောင်ယူတာဗျာ့.
ငွေတော်တော်များများကုန်သွားတယ်ဗျာ။ အချုပ်ထဲမှာ လည်းဒီကောင်လေး ၂ညအိပ်လောက်နေလိုက်ရသေးတယ်။အမှုမဖွင့်ရုံးမတင်တာပဲတော်သေးတယ်ပြောရမှာပဲ
အဲဒီတော့ အခုစားသုံးဆီကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်လို့ လာသိမ်းရင် သူတို့ဆီပါသွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဗျို့ .....
သူတို့ရှေ့မှာပဲ သွန်သာပစ်လိုက်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ဗျာ။ ရှုံးမယ့်အတူတူတော့ မထူးဘူးလေဗျာ။
မီးသတ်တို့ရဲတို့ကြံ့ဖွတ်တို့စွမ်းအားရှင်တုို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ဗျာ ရှမ်းပြည်မှာလေ တိုင်းရင်းသားတွေကိုသိပ်အနိုင်ကျင့်တာဗျာ့
စစ်တပ်ဆိုရင် အရင်ကဆို ရှမ်းမိန်းမပျိုလေးတွေ အသက်တောင် ၁၂ လောက်ပဲရှိသေးတာသူတို့ရဲ့ စစ်အရာရှိတွေရဲ့ စိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်သွားရတာဗျာ။။ အဲဒီထဲမှာ ကျတော့အမျိုးတောင်ပါသွားသေးတယ်အခုမှနည်းနည်းတော်သွားတာ။
ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ အပ္ပဒေနေဘိက္ခဝေသမ္မာဒေထ ဆိုတဲ့စကားကိုတော့လက်မလွှတ်နဲ့ဗျို့
အခုခေတ်က တရားလက်မဲ့တဲ့ခေတ်။ လူယုတ်မာလူရမ်းကားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ခေတ်ဗျာ့
ဒါကျတော့ရဲ့ကိုယ်တွေ့နော် လုပ်ကြံပြောတာမပါဘူးအမှန်တွေပဲနောက်ကြုံရင် ရှမ်းတောင်သူတွေလယ်သိမ်းခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြဦးမယ်အသိမ်းခံရတဲ့အထဲမှာ ကျတော့်အမျိုးတွေပါတယ်ဗျာ့
ချစ်သော .. စိုင်းသိင်္ခ ( တောင်ကြီး )